Umkhiqizi we-Magnetic owenziwe ngesibalo nomshini wokuphotha
Ikhaya / Umshini Wokugaya Magnetic / Umshini wokukhipha we-Magnetic & wokupholisha
Umshini wokukhipha umshini we-magnetic & polishing
Isigaba: Umshini Wokugaya Magnetic Tags: umshini wokupholisha owonakalisayo, umshini oshisayo omagagasi, i-kazibuthe ephikisayo, imishini yokugaya kagesi, umshini wokugaya magnetic, umshini wokupholisha uzibuthe
Imagnetic deburring & polishing machine Principle
Imishini yokugaya iMagnetic (umshini wamagnetic deburring & wokupholisha) sebenzisa amandla omlingo wensimu yamagnetic ukwenza izikhonkwane zensimbi ezingenasici zijikeleze ngokushesha kakhulu, nezikhonkwane ze-burr, zipholile bese zihlanza izingcezu zomsebenzi ngokuphumelelayo nangendlela efanele. Lo mshini awulimazi imvelo uma isebenza.
Magnetic Grinding Machine (magnetic deburring & polishing machine) Imininingwane
The Umshini wokugaya kazibuthe (umshini kazibuthe wokupholisha nomshini wokupholisha) yi-SUPER enkulu yokugaya igumbi eliklanyelwe, elifanelekileukugaya, ukupholisa noma ukuhlanza. I umshini wokugaya magnetic isebenza ngokuzenzakalelayo, umuntu oyedwa angasebenzisa imishini eminingi.
Imishini yokugaya iMagnetic (umshini wamagnetic deburring & wokupholisha) sebenzisa amandla omlingo wensimu yamagnetic ukwenza izikhonkwane zensimbi ezingenasinhla zijikeleze ngokushesha kakhulu, uku-de-burr, ukupholisa nokuhlanza izingcezu zomsebenzi ngokuphumelelayo nangokuqondile.
Imishini yokugaya kazibuthe (umshini wamagnetic deburring & wokupholisha) kungobungane bezemvelo, CHA ukungcola. Kunjalo ukugayafuthi ukuphoqa ngokushesha, ngempumelelo. Banekhono elihle kakhulu lokuziqhenya ngokusheshisa, ngokuphumelelayo okukhulu ukugaya izimbobo ezincane zangaphakathi, amapayipi angaphakathi, izinsimbi, njll. YENZA umonakalo ebusweni bomsebenzi, futhi Ungathinti ukuchithwa kwamakamelo.
Imishini yokugaya magnetic zisebenza ngendlela elula, ephephile futhi elula, izindleko eziphansi kanye nokusebenza isikhathi eside.
Imikhiqizo yethu imishini yokugaya kufanelekile ukugaya, de-burring, ukugcoba nokubopha zonke izingxenye zensimbi ezithintekayo zensimbi, izinsimbi zensimbi, ipulasitiki eqinile, njll imishini yokugaya zisetshenziswa ezimbonini ze-horologe, i-eyeglass, ukukhiqizwa kokukhiya, imihlobiso nobucwebe, i-electron, i-artware, imishini ne-hardware, njll.
Ubucwebe, ubuciko bezandla, iqoqo, umshini wokuzenzakalela uyizingxenye, ukusakaza okokufa, izingxenye zomshini wokushaya, izintambo zentwasahlobo kanye nezinsimbi, i-elekthronikhi, ezokuxhumana ngocingo, izingxenye ezisele zezokwelapha.
1.Ifanelekile ngensimbi yensimbi elula, insimbi engeyona eyensimbi kanye nezingxenye eziyigugu ezinzima zeplactic.
2.Realizing multi-effec ezifana Burr wlimination, emuva engela,ukupholisa nokuhlanza, njalonjalo
3.wokucwebezelisa i-angle efile yezingxenye ezingajwayelekile, i-tubular,
Isikhathi se-4.blending, isivinini esikhulu, ukusebenza okulula nokuphephile
5.Adjustable angahlangabezana nazo zonke izidingo ezipholisha
Ayikho i-angle efile ngenkathi ipholisha
7.Ukuqeda ukukhumbuza, kungakhumbuza lapho ukupholisha kwenziwe, umuntu angalawula eziningana
I-8.Volage, yamanje, imvamisa kanye nesikhathi ilawulwa kalula
9.wokucwebezelisa inqubo ayidingi ukungenelwa ngumuntu
Umshini Wokugaya Magnetic (umshini wamagnetic deburring & wokupholisha) ususa ungqimba oboshiwe noma izindawo ezishisayo zezingxenye, ulahle futhi uqede izingxenye ngesikhathi esifushane kakhulu. Umshini usebenza kahle ikakhulukazi ezingxenyeni ezingaphakathi, izibunjwa eziyinkimbinkimbi, izibopho noma izikhonkwane. Umshini wokugcoba magnetic ngeke ulimaze izingxenye zezingxenye, futhi ungashintshi ukunemba kwezingxenye ngemuva kokuqedela. Umshini usebenza ngokuphumelelayo futhi kuphela ngamaminithi we-5 ~ 20 adingekayo ezingxenyeni. Umshini Wokugaya Magnetic (umshini wamagnetic deburring & wokupholisha) angagcina izingxenye zensimbi zensimbi nama-plastiki aqinile.